मणि थापा हामी माओवादीहरुले एउटै माओवादी केन्द्र निर्माण गर्यौँ । केन्द्र निर्माणपछि राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरणमा परिवर्तन आएको छ । त्यसको जगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ । यो केन्द्रका लागि सुखद संयोग हो । यो सुखद संयोगलाई सुखद परिणाम दिनसक्नुपर्छ । यो हामी माओवादीका लागि चुनौतीभन्दा पनि अ..
गोपाल बुढाथोकी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गृह जिल्ला झापा पुगेर एउटा रहस्य खोलेका छन् । उनको..
छोरी निशा कुसुमको विवाहमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शीतल न..
निमकान्त पाण्डे मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भनेर ..
गोकर्ण भट्ट भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीका नीतिहरुका कारण किसानहरुले सामूहिक आत्महत्या..
गणेशकुमार निरौला जर्मनी एकीकरण हुनुअघि सानाठूला गरी झण्डै तीन सय राज्यमा विभाजित थियो । १९औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा त्यहाँ जोल्बरिन संघ निर्माण भएपछि जर्मनी एकीकरणको परिस्थिति देखा प¥यो । सन् १८६१ मा जर्मनीको सबभन्दा शक्तिशाली राज्य प्रसामा विलियम प्रथम राजा र बिस्मार्क प्रधानमन्त्री बनेपछि एकीकरणको कामले प्राथमिकता र गति पायो ।..
मानिस परिवर्तनका संवाहक हुन् । समाजमा हुने गरेका जातीय, धार्मिक कुरीति, अन्धविश्वास समयक्रमसँगै परिवर्तित, परिमार्जित, सुधारोन्मुख हुँदै जान्छन् । मानिसमा हुने चेतना स्तरको विकाससँगै उसले अङ्गीकार गर्ने सामाजिक–परम्परा, धार्मिक–मूल्यमान्यता पनि परिवर्तन हुँदै जाने हुनाले समाज विकासको बाटोमा अघि बढ्छ । तर यसको आसय परिवर्तनको प्रक..
दिनको झल्को बिहानीले दिन्छ । कहिलेकाहीँ अप्रत्यासित घटना सङ्केतमा खराब देखिए पनि परिणाममा फलदायी हुन्छन् । त्यसैको परिणाम हुन् मधेस आन्दोलन । जुन कुरा कसैले पनि चिताएका थिएन् । मधेस आन्दोलनको बिजारोपन हुँदै गर्दा त्यसले अर्कै भाव र धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको भान हुन्थ्यो । अर्थात् मुलुकमा सदियौँदेखि उत्पीडनको जाँतोमा पिल्सिँदै ..
सांसद पनि खरीद विक्री हुन्छन् र ? कांग्रेस र एमाले पनि खरीद विक्रीमा लाग्छन् र ? २०५१ साल अघि सर्वसाधारण यस्तै ठान्थे, यस्तै सोच्थें पनि । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा कुनै पार्टीले बहुमत ल्याएनन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले बन्यो, त्यसपछिको ठूलो कांग्रेस बन्यो । तेस्रो ठूलो पार्टी राप्रपा बन्यो । राप्रपामा अहिलेकै नेताहरु थिए [..
केही समययता पुँजी बजारमा मन्दी छाइरहेको छ । विगतका महिनाहरुमा नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने सन्तोषजनक स्थिति नै थियो । तर पछिल्ला दिनहरुमा भने परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत भारी मात्रामा गिरावट आइरहेको छ । यसअघि दैनिक अर्बभन्दा माथि रहने सेयर कारोबार पछिल्ला दिनहरुमा ३० करोडको सेरोफेरोमै सीमित हुने गरेको छ भने परिसूच..
नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारको मात्रा अत्यधिक छ । अधिकांश भ्रष्टाचार नेताहरुको संरक्षणमा नै हुने गरेको छ । करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट त्यसको दोब्बर दोहन गर्ने परम्परा जस्तै भइसक्यो । नेताहरुमा समेत राजनीति आखिर पैसा वा बलिदान केका लागि भन्ने प्रश्नको राम्रो उत्तर पाइँदैन । ने..
२४ पुस २०७३ नेपाली जनताको निमित्त सुखद् समाचार प्राप्तिको दिन बन्यो । पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका निमित्त अयोग्य ठहर्याएको छ । अर्थात् लोकमानतन्त्र युग सदाका लागि अन्त्य भएको छ । साथै एमालेलगायतका प्रतिपक्षी गठबन्धनको अवरोधबीच सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन..
त्रिवि सुधारका शर्तहरु
नेपालमा हाल उच्च स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने नौवटा विश्वविद्यालय र चारवटा स्वायत्त मेडिकल एकेडेमीहरु छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार उच्च शिक्षा लिने कुल विद्यार्थीको झण्डै ८८ प्रतिशत भार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले लिएको छ । त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास, अति राजनीतिकरण र व्यवस्थापकीय एवं प्रशासनिक कम..
स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको जगमा असल एवं मजबुत राष्ट्रियता निर्माण हुने विचारका पक्षधर भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मानिएको संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि भनेका थिए– ‘मैले के महसुस गरेको छु भने यो लचिलो छ तर उत्तिकै मजबुत पनि । जसले देशलाई शान्ति र युद्ध दुवै समयमा जोडेर राख्नसक्छ । ..
‘हेर्नुस्, आउँदो २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव भएन भने देश बरबाद हुन्छ’–राजधानीको उच्च राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणको चियागफसम्मको साझा विषय हो यो । आजभोलिको यो गफमात्र होइन, चिन्ता पनि हो । तर, यस्तो चिन्ता गर्ने उच्च राजनीतिक वृत्तको दायरा धेरै फराकिलो छैन । एकखाले नेता र पार्टीका नेताहरु यस्तो कुरा सुन्नै मान्दैनन् । सबैलाई थाहा भए..
गोकर्ण भट्ट ‘सुदूरपश्चिममा हिमपात ।’ यो शीर्षकमा आइतबार बिहान विभिन्न अनलाइन र सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भए । सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समितिले यो समाचार प्रकाशित गर्दा सम्पादकदेखि डेस्कमा बस्नेहरुले आधारभूत ज्ञानसमेत राखेको देखिएन । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा हिमपात भएको थियो । कैलाली र कञ्चनपुर पनि सुदूरपश..
लक्ष्मीप्रसाद पङ्गेनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मङ्सिर १४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलसहितका ९ दलले संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि विपक्षीबाट मङ्सिर १६ देखि पुस १९ गतेसम्म ११औं पटक संसद अवरुद्ध भइसकेको छ । प्रदेश न. ५ बाट पहाडी क्षेत..
केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियता भन्ने शब्द तथा राष्ट्रवादी भावनाले बढी महत्व पाएको छ । आफ्नो दल, सङ्घ सङ्गठन मात्र होइन आजकल त एक्लो व्यक्ति पनि नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकी राष्ट्रियता धरापमा परेको चिन्ता लिँदै राष्ट्रवादी भावना व्यक्तगर्दै सडकमा हिँडेको देख्न पाइन्छ । देशका दल, सङ्घ, सङ्गठन राष्ट्रियताको रक्षा गर्न ज..
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन एउटा दुःखद घटना मात्र साबित हुने गरेको छ । कुनै पनि विभाजनले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको पाइँदैन । सामान्य विवादले गुट सृजना हुने र त्यही गुटको नेता बन्न पाइने महत्वाकांक्षाले पार्टीहरू विभाजित हुने गरेका छन् । नेताहरूको महत्वाकांक्षाले नै पार्टीहरूमा विभाजन आउने गरेको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ..
माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिना पूरा भएछ । मन्त्री भइसकेपछि ४२औं दिन अर्थात् असोज २० गते तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको १९ बुँदे तात्कालीन कार्ययोजना मेरो अगाडि छ । तपाईं मन्त्री हुँदै गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले पेश गरी संसदबाट पारित शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक र खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन राष्ट्रपतिबाट प..
गतवर्ष यतिबेला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’को मित्रता खुबै जमेको थियो । माओवादी र प्रचण्डका खुङ्खार विरोधी नेताका रुपमा परिचय बनाएका केपी ओलीलाई संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले निर्णायक भूमिका खेलेका कारण उनीहरुको मित्रता त्यसरी जमेको थियो । दुई जनाले हाँस्दै कुम ज..
नेपालका राजनीतिक नेताहरु, राजनीतिक विषयहरु उनीहरुको काबु बाहिर गएका कारणले अब उनीहरुले विवाद संविधान र कानुनी क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमाथि निकै गम्भीर राजनीति गर्न थालेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधनका लागि आवश्यक सदस्यको गणितीय सङ्ख्या आफ्नो समर..
तेस्रो विश्व, भेनेजुएला र नेपाली क्रान्ति
तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा सामाजिक परिवर्तनका लागि कुनै हलचल हुँदा जहिले पनि त्यसको सोझै प्रभाव पश्चिमका साम्राज्यवादी मुलुकहरुमा पर्छ । किनभने आम रुपमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु कुनै न कुनै समय यिनका उपनिवेश रहेका थिए । जुन मुलुकहरुमा तिनको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भयो, त्यहाँको अर्थतन्त्रमा इनको पकड पहिला जस्तै बलि..
एकीकृत नेकपा माओवादीबाट १६ महिना अगाडि सम्बन्धविच्छेद गरेर डा.बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टीको निर्माण गरेलगत्तै रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा ड्यासमाओवादीबाट विद्रोह गर्दै ठूलै समूहबीच एकीकरण भई नेकपा माओवादी केन्द्र गठन भएपछि प्रचण्ड नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि एउटा कार्यक्र..
१. बिषय प्रवेश: लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन सम्पन्न भएको १० बर्ष पूरा हुदैछ । माओवादी जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति र संविधान–०७२ को घोषणाका बर्षहरु गन्दा हामीले २१ बर्ष पूरा गरेका छौं । यी २१ बर्षहरु हाम्रो लागि तीब्र राजनीतिक उथलपुथल, संघर्ष र उतारचढावका बर्षहरु भए । जसले हाम्रो अर्थराजनीत..